गर्भवती श्रीमतीसंग यौन सम्पर्क राख्नुस् , श्रीमती तृप्त हुन्छिन्
माघ ८, २०७८ ०५:१२:२८
चैत्र १, २०७६ बागमती खबर
कतिले यो पनि भन्छन् महिला गर्भवती भएको तीन महिनापछि यौन सम्पर्क गर्नु हुन्न । तर, मेडिकल साइन्स उक्त मान्यतासंग सहमत छैन ।
चिकित्सकका अनुसार गर्भवती भएको बेला महिलाको शरीरमा हर्मोनहरु अदल बदल भइरहेको हुन्छ । यो अवस्थामा महिलालाई यौनको भोक बढी हुन्छ । कतिपय महिलाहरुले गर्भवती हुँँदा गरिएको यौन सम्पर्कमा बढी आनन्द प्राप्त गर्दछन् ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, चैत्र १, २०७६, ०९:०३:००
यसरी याैन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहदैन
तपाईलाई थाहा छ ? यौन सम्पर्कका बेला महिलाहरुले यी १५ कुरा सोच्छन्
के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ? बुझी राखौं
कसिलो र आकर्षक स्तन यसरी बन्छ
यवतीहरु कसरी प्रयोग गर्छन स्त्री क’ण्डम
पुष ९, २०७६ बागमती खबर
सेक्सका लागि अँधेरो नै किन रोजिन्छ ?